Internet an'ny zavatra - Pandawill Technology Co., Ltd.
The Internet amin'ny zavatra (IoT) mihetsika. Matetika, i IoT dia antenaina hanolotra fampifandraisana mandroso amin'ny fitaovana, rafitra ary serivisy izay mihoatra ny fifandraisana amin'ny milina (to M2M) ary mandrakotra karazana kavina, domains ary fampiharana isan-karazany. ), antenaina hampiditra automatique amin'ny sahan'asa rehetra. Tombanana ho manodidina ny 26 miliara fitaovana amin'ny Internet of Things amin'ny taona 2020. Ny fahafaha-mampita tambajotra tafiditra ao anaty CPU, memory ary loharanom-pahefana voafetra dia midika fa mahita rindrambaiko i IoT saika amin'ny sehatra rehetra. Ireto ny fampiharana lehibe amin'ny Internet of Things.
Ny fampiharana fanaraha-maso ny tontolo iainana ao amin'ny IoT dia matetika mampiasa sensor ho fanampiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rivotra na ny rano, ny atmosfera na ny toetoetran'ny tany, ary mety misy faritra toa ny fanaraha-maso ny fivezivezan'ny bibidia sy ny toeram-ponenany aza.
Fananganana sy fanodinam-batana an-trano
Ny fitaovana IoT dia azo ampiasaina hanaraha-maso sy hifehezana ny rafitra mekanika, herinaratra ary elektronika ampiasaina amin'ny karazana trano isan-karazany (ohatra, ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina, ny indostria, ny andrim-panjakana na ny trano onenana. fanaraha-maso ny jiro, fanafanana, rivotra, rivotra iainana, fitaovana, rafi-pifandraisana, fialamboly ary fitaovana fiarovana an-trano mba hanatsarana ny fahafaha-miaina, fampiononana, fahombiazan'ny angovo ary fiarovana.
Ny fampidirana ireo rafitra mahatsapa sy mihetsika, mifandraika amin'ny Internet, dia toa manatsara ny fanjifana angovo amin'ny ankapobeny. Antenaina fa ho ampidirina amina karazana fitaovana mandany angovo ny fitaovana IoT ary afaka mifampiresaka amin'ny orinasan-tsivana. Ny fitaovana toy izany dia mety hanolotra ny fahafahan'ny mpampiasa mifehy lavitra ny fitaovany, na mitantana azy ireo amin'ny alàlan'ny sehatr'asa mifototra amin'ny rahona, ary ahafahan'ny asa mandroso toy ny fandaharam-potoana.
Rafitra fitsaboana sy fitsaboana
Ny fitaovana IoT dia azo ampiasaina ahafahana manara-maso ny rafitra fitsaboana lavitra sy ny rafitra fampandrenesana vonjy maika. Ireo fitaovana fanaraha-maso ara-pahasalamana ireo dia mety miainga amin'ny fanaraha-maso ny tosidra sy ny tahan'ny fo hatramin'ny fitaovana mandroso izay afaka manara-maso ny implants manokana, toy ny pacemakers na ny fitaovana fihainoana mandroso. Ireo sensor manokana dia azo ampiasana ao anatin'ny toerana onenana koa hanaraha-maso ny fahasalamana sy ny fahasalamana ankapobeny ny olom-pirenena, na dia miantoka aza ny fitsaboana sahaza azy ireo ary manampy ny olona hiverina amin'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fitsaboana ihany koa.Fitaovana fampiasa amin'ny mpanjifa hafa hampirisihana ny fiainana salama, toy ny mizana mifamatotra na ny mpanara-maso azo ampiasaina, koa azo atao amin'ny IoT.